Lifestyle Archives - MYANMORE+
MYANMORE +Your Source of Everything Lifestyle & Entertainment
Lifestyle myanmoreplus - November 12, 2020 0
ဧရာမစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေရဲ့ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တွေလို့ပြောလိုက်ရင် အနောက်တိုင်းဝတ်စုံအပြည့်ဝတ်ထားတဲ့ယောကျ်ားတွေကိုသာမြင်လေ့ရှိပါတယ်။ KBZ Bank (ကမ္ဘောဇဘဏ်) ရဲ့ Deputy Chief Executive Director ဖြစ်သူမနန်းလိုင်းခမ်းကတော့ ဒီပုံသေကားကျသတ်မှတ်ချက်တွေကနေ ကွဲထွက်သူပါ။ ငယ်ရွယ်ပြီးရိုးရိုးရှင်းရှင်းနေထိုင်ပြောဆိုတတ်သူမနန်းလိုင်းခမ်းဟာ မြန်မာ့အကြီးဆုံးဘဏ္ဍာရေးလုပ်ငန်းကြီးရဲ့ ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်ပါတယ်။ မနန်းလိုင်းခမ်းရဲ့အထင်ရှားဆုံးဝိသေသလက္ခဏာက နုပျိုလှပမှုဆိုတာထက် ရိုးသားပွင့်လင်းမှုလို့ပြောရမယ်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့သက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့အဝတ်အစားတွေကိုဝတ်ဆင်လေ့ရှိပြီး စကားပြောတဲ့အခါ ပြူငှာယဉ်ကျေးတဲ့မနန်းလိုင်းခမ်းဟာဗဟုသုတကြွယ်ဝသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျမတို့စကားပြောကြည့်တော့ မနန်းလိုင်းခမ်းဟာ digital payments ကနေ cold...
အမြင့်မားဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်တွေအတွက် ဖန်တီးထားတဲ့ All New Pajero Sport 2020
Lifestyle myanmoreplus - November 1, 2020 0
Mitsubsihi Motors ရဲ့အထင်ကရ Model အဖြစ် ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်ကပါ လက်ခံပြီးဖြစ်တဲ့ All New Pajero Sport 2020 Model အသစ်ဟာဆိုရင်ဖြင့် ယခင့်ယခင် Model များထက် ပိုမိုအဆင့်မြှင့်တင်မှုများကို ပြုလုပ်ခဲ့ ပြီ: ၃၁ရက် အောက်တိုဘာလ ညနေ ၃နာရီခနိ့တွင် live တင်ဆက်ပြသာကာ မိတ်ဆက်ပေးသွားခဲ့ပါတယ် ။Mitsubishi Motors Global Tagline "Drive your Ambition" ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်အတိုင်း သင့်စိတ်စေရာကို Pajero Sport နဲ့ဆို ဘယ်နေရာမဆို သွားလာနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…
Genshin Impact Beginner’s Guide
Lifestyle Nay Thiha - October 8, 2020 0
Genshin Impact ဂိမ်းထွက်တာ တပတ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့တချို့ဆိုဆော့တောင်ဆော့နေလောက်ပါပြီ။ Online ပေါ်မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ဂိမ်းမို့ဆော့ချင်ပေမယ့် ဘာတွေလိုအပ်သလဲ၊ ဘယ်လိုဆော့ရမလဲ မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက် သိထားသင့်တဲ့အခြေခံအချက်အလက်လေးတွေကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ ကျနော်လည်းဆော့တာသိပ်မကြာသေးတော့ beginner's guide လောက်ပဲပြောပြသွားပါ့မယ်။ Platforms & requirements GI ကို Windows, PlayStation 4, Android, iOS တွေမှာကစားနိုင်ပါတယ်။ Nintendo Switch အတွက်ထုတ်မယ်လို့သိရပေမယ့်အသေးစိတ်မကြေညာသေးပါဘူး။ ကျနော်ကတော့...
Lifestyle myanmoreplus - September 23, 2020 0
လမ်းဘေးခွေးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ရိုင်းစိုင်းကြမ်းတမ်းပြီး ထိန်းရခက်တဲ့ခွေးတွေလို့ထင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လက်တွေ့မှာတော့ လမ်းဘေးခွေးတွေဟာလည်းချစ်ဖို့ကောင်းပြီး အသိဉာဏ်မြင့်တဲ့ခွေးတွေပါ။ဒီအကြောင်းကိုပြောပြလာသူကတော့ လမ်းဘေးခွေးလေးတွေမွေးထားတဲ့ Laura နဲ့ Zaid ဖြစ်ပါတယ်။ Zaid Moosa ဟာပြတင်းပေါက်ကနေ Lady Babous လို့သူနာမည်ပေးထားတဲ့လမ်းဘေးခွေးမလေး Lady Babous ကိုကြည့်နေတယ်။ ခွေးမလေးဟာရေခန်းနေတဲ့မြောင်းထဲမှာနေတဲ့သူ့သားသမီး ၈ကောင်ကိုအစာကျွေးနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်နောက်တပတ် ၂ပတ်အတွင်းမှာပဲခွေးလေးတွေအားလုံးလိုလိုသေဆုံးသွားပြီး ခွေးမလေးတကောင်သာကျန်ပါတော့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ Zaid လည်းအဲ့ဒီခွေးမလေးကိုမွေးစားခဲ့ပြီး...
အသက္အရြယ္အပိုင္းအျခားအလိုက္ ကေလးတို့လုပ္နိုင္တဲ့ အလုပ္ေလးမ်ား
Lifestyle Wai Lin - September 4, 2020 0
ကေလးငယ္ေတြကို ငယ္စဥ္ကတည္းက ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးတတ္ေအာင္၊ အေလ့အက်င့္ေကာင္းေတြရေအာင္ မိဘေတြအေနနဲ႔ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သင့္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္လုံး မိဘေတြက လိုက္လုပ္ေပးရင္ ယုံၾကည္မွုေပ်ာက္ဆုံးၿပီး သူမ်ားကို အားကိုးခ်င္စိတ္ မ်ားလာနိုင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ့အလုပ္ေလးေတြက ငယ္ေသးတယ္ထင္ရေပမယ့္ သင္ေပးရင္လုပ္တတ္ေနပါၿပီ။ ကေလးငယ္ေတြကို အသက္အပိုင္းအျခားအလိုက္ လုပ္ေဆာင္သင့္တဲ့ အလုပ္ေလးေတြကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ ၂ ႏွစ္ မွ ၃ ႏွစ္ၾကား (၁) အိပ္ယာခင္း၊...
Lifestyle myanmoreplus - August 20, 2020 0
မတ်လကတည်းကခရီးသွားတွေလည်ပတ်ခြင်းမရှိတော့တဲ့အင်းလေးဟာတိတ်ဆိတ်ခြောက်ကပ်လို့နေပါတယ်။ ဆိပ်ကမ်းမှာအစီအရီရပ်ထားတဲ့လှေတွေကိုတွေ့နိုင်ပြီး လှေပိုင်ရှင်တွေဟာဝင်ငွေရမယ့်တခြားအလုပ်တွေပြောင်းလုပ်နေရပါပြီ။ “လှေစီးမလားဗျ။ ကျနော့်လှေနဲ့အင်းလေးကန်တဝိုက်လိုက်ပြပေးနိုင်ပါတယ်။” အင်းလေးကန်နဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့ညောင်ရွှေကဆိပ်ကမ်းအနားလမ်းလျှောက်ဖူးသူတိုင်း ဒီဖိတ်ခေါ်သံကိုကြားဖူးမှာပါ။ Covid-19 ကြောင့်ခရီးသွားလာမှုတွေရပ်တန့်သွားတာ မတ်လကုန်လောက်ကတည်းကဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ကဆိုဆူညံစည်ကားနေတတ်တဲ့ဆိပ်ကမ်းဟာလည်းတိတ်ဆိတ်သွားတာ အဲ့ဒီကတည်းကပါပဲ။ ဒါဟာစိတ်အပန်းပြေစရာတိတ်ဆိတ်မှုမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အင်းလေးကန်မှာတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့လှေပေါင်း ၁၂၀၀ ကျော်ရှိပါတယ်။ ဒီအထဲက ၃ပုံ ၂ပုံလောက်ဟာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအပေါ်အဓိကမှီခိုနေရတယ်။ ကျန်တဲ့လှေတွေကတော့ ကုန်စည်နဲ့ခရီးသွားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းနဲ့ အသက်မွေးကြတယ်။ ဧည့်သည်တွေအရမ်းကျတဲ့အချိန်ဆို ဒီလှေတွေတောင်ခရီးသွားလုပ်ငန်းထဲရောက်လာလေ့ရှိတယ်။ ကပ်ရောဂါကြောင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကျဆင်းမှုဟာဟိုတယ်တွေ၊ လေကြောင်းလိုင်းတွေ၊ စားသောက်ဆိုင်တွေသာမကဘဲ အခုလိုအောက်ခြေကပြည်သူတွေကိုပါထိခိုက်ပါတယ်။ ဇူလိုင်လကအာဇာနည်နေ့နဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးရုံးပိတ်ရက်ရှည်ရတဲ့အချိန်လောက်ပဲ အင်းလေးဟာခရီးသွားတွေနဲ့ပြန်စည်ကားလာတယ်။ ဒါဟာ...
Face Mask ဝတ်ထားတဲ့အခါ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်နေစေနိုင်မယ့်နည်းလမ်းများ
Lifestyle Soe Thiha Htun - May 25, 2020 0
လူစုလူ‌ေဝးကြားကိုသွားတဲ့အချိန်တိုင်း Face Mask ဝတ်ဆင်သွားခြင်း က COVID-19 ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုနှုန်း‌‌ေနှး‌ေကွးသွား‌‌ေအာင်လုပ်‌ေဆာင်နိုင်တဲ့အ‌ေကာင်းဆုံးနည်းလမ်း‌‌ေတွထဲကတစ်ခုဆိုတာကိုတော့ စာဖတ်သူတို့လည်း သိကြပြီးဖြစ်မှာပါ။ ဒါပေမဲ့လည်း Face Mask ဝတ်ဆင်ရခြင်းဟာ အမြဲတစေ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်နေ‌စမယ့်ကိစ္စမျိုးေတာ့ မဟုတ်ပြန်ပါဘူး။ အချိန်ကြာကြာဝတ်ဆင်ပြီးတဲ့အခါမှာ နားရွက်‌ေတွနာကျင်ကျန်ခဲ့မှု၊ ယားယံမှုနဲ့ ပိတ်လှောင်မွန်းကြပ်ခြင်းကိုကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်‌ေဝဒနာ တွေ ပေါ်လာစေတတ်ပါတယ်။ အကယ်၍ ဒီလို‌ပြဿနာ‌ေတွကိုကြုံလာခဲ့ရင် သောကများမ‌ေနရ‌ေစဖို့အတွက် (တစ်ချိန်လုံးနီးပါး Mask ဝတ်ဆင်‌ထားရသူ‌ေတွ)...
Lifestyle Soe Thiha Htun - May 22, 2020 0
Outdoor Spacing ကြိတ်ကြိတ်တိုးလူစည်‌ကားခြင်းက Social distancing ရှိဖို့လိုတဲ့အခုအချိန်ကာလမှာ စား‌ေသာက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်အတွက် ပြဿနာဖြစ်‌လာ‌ေစမှာပါ။ အလုံပိတ်အအေးပေးထားတဲ့အခန်းတွေဟာ virus ကူးစက်မှုကို ပိုအားပေးနိုင်တယ်လို့တွေ့ရှိထားမှုတွေကြောင့်လည်း ‌Outdoor Space မှာခင်းကျင်းရောင်းချမှုတွေက များလာခဲ့ပါပြီ။ ဆိုင်အပြင်ဘက်မှာ သဘာဝလေတဖြူးဖြူးနဲ့ထိုင်ပြီးစား‌ေသာက်ရတဲ့အတွေ့အကြုံက ပုံမှန်လို ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ Designer mask ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ ဆိုင်ဝန်ထမ်းများ စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ထဲစဝင်တဲ့အချိန်မှာ ဆိုင်ဝန်ထမ်း‌ေလးတွေရဲ့ ချိုသာတဲ့အပြုံးနဲ့ဆီးကြိုမှုကို မတွေ့ရနိုင်တော့ပါဘူး။ အားလုံးက Face...
ရေခဲသေတ္တာက စွမ်းအင်များစွာသုံးစွဲ‌ေနမှုကို ဘယ်လို‌ေလျှာ့ချနိုင်မလဲ
Lifestyle Soe Thiha Htun - April 20, 2020 0
ရေခဲသေတ္တာဆိုတာ အိမ်တိုင်းလိုလိုမှာ တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့အရာဖြစ်သလို အပြင် မီးဖိုချောင်အတွက် တကယ်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ပစ္စည်း တစ်ခုဆိုတာ သဘောတူကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ အသုံးဝင်တယ်ဆိုပေမဲ့ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုများလွန်းပါတယ်။ တစ်နေ့ကို ၂၄ နာရီ၊ ၁ နှစ်ကို ၃၆၅ ရက်လုံးကို အလုပ်လုပ်နေပြီး ပိတ်ပစ်လိုက်ဖို့ကလည်း အဆင်မပြေလှပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း ပေးဆောင်နေရတဲ့ လျှပ်စစ်မီတာခ ရဲ့ ၁၅ -...
Lifestyle Nay Thiha - January 7, 2020 0
ဆရာစံဇာဏီဘိုအသက္ ၆ႏွစ္ေလာက္မွာ နယ္လွည့္ေရွ႕ျဖစ္ေဟာဆရာတေယာက္က သူၾကီးလာရင္ ေဗဒင္ဆရာအျဖစ္အသက္ေမြးရလိမ့္မယ္လို႔ ေဟာခဲ့ဖူးပါတယ္။ အဲ့ဒီေခတ္ကေဗဒင္ဆရာေတြဟာဘုရားေပၚမွာေနရင္း၊ လမ္းတကာေလွ်ာက္သြားရင္း ေဗဒင္ေဟာျပီး မျဖစ္စေလာက္ေငြေၾကးနဲ႔ရပ္တည္ရတဲ့ေခတ္ျဖစ္တာမို႔ သူ႔အေနနဲ႔ဒီေဟာကိန္းကိုမႏွစ္ျမိဳ႕ခဲ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္လက္ေတြ႔က်တဲ့လွ်ပ္စစ္နည္းပညာတကၠသိုလ္မွာပဲ ပညာသင္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ ရန္ကုန္မွာနည္းပညာေက်ာင္းတက္ေနတုန္းမွာပဲ စံဇာဏီဘိုဟာႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြေၾကာင့္ ၁၉၇၄ခုႏွစ္ အသက္ ၂၀အရြယ္မွာအဖမ္းခံခဲ့ရပါတယ္။ ယေန႔မွာေတာ့ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ၀င္တေယာက္ျဖစ္ေနတဲ့ စံဇာဏီဘိုဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္းမွာတတပ္တအားပါ၀င္လ်က္ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးမႈေၾကာင့္ေထာင္က်ခဲ့ရတာက သူ႔ဘ၀အတြက္တဆစ္ခ်ိဳးအေျပာင္းအလဲတခုပါ။ ေထာင္ထဲမွာ လကၡဏာနဲ႔ေရွ႕ျဖစ္ေဟာဆရာ ဦးစံတင္ေအာင္နဲ႔ေတြ႔ဆံုခဲ့ျပီး သူ႔ဆီကေဗဒင္ပညာေတြသင္ယူခြင့္ရခဲ့တယ္။ ေထာင္ထဲမွာပဲ နကၡတ္ပညာ၊ လကၡဏာၾကည့္ပညာ၊ ကိန္းဂဏန္းအတြက္အခ်က္နဲ႔ တားေရာ့ကတ္ေဟာနည္းေတြအေၾကာင္းသင္ယူခဲ့ျပီး ဒီပညာေတြနဲ႔ပဲႏိုင္ငံေက်ာ္ေဗဒင္ဆရာတေယာက္ ျဖစ္လာတဲ့စံဇာဏီဘိုဟာ ေထာင္ကသူ႔ဒုတိယတကၠသိုလ္လို႔ တင္စားေခၚေ၀ၚေလ့ရွိပါတယ္။ သူဟာကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္ေတြကအေျခခံတြက္ခ်က္ေဟာကိန္းထုတ္တာျဖစ္ျပီး အၾကားအျမင္ရတဲ့စြမ္းအားရွင္မဟုတ္ပါဘူးလို႔ေျပာတယ္။ ယေန႔အခ်ိန္ထိသူ႔ေဟာကိန္းေတြဟာ...
MYANMORE+ guides you through what’s going on - politics and policy, business and pop culture, food, science, movies and everything else that matters. You can find our work wherever you live on the internet — Facebook, YouTube, Instagram, and more. Contact us on +95 (0)9 779 003 701 +95 (0)9 779 003 702
လကမၻာေပၚပထမဆံုးေရာက္ခဲ့တဲ့အာကာသယာဥ္မွဴးရဲ့ ကမၻာေက်ာ္ OMEGA Speedmaster နာရီ
ကရင္ရိုးရာအစားအစာ တာလေပါဟင္း ခ်က္နည္း
ရန္ကုန္ဂီတေလာကထဲ ေမ်ာလြင့္လာတဲ့ သံစဥ္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ Gabriel
News & Features82
Myanmore Media Group
© Myanmore Media Group